Intsingiselo yelitye lenyanga yenyanga kunye neempawu zokuphilisa-ividiyo
tags Ingxelo IweMpathombi, rainbow, umnyama; ilitye lenyanga
Intsingiselo yelitye lenyanga intsingiselo kunye nokuphilisa iipropathi. Ixabiso leblue sheen lenyanga.
Thenga ilitye lenyanga lenyanga kwivenkile yethu
Ilitye lenyanga yomnyama vs ilitye lenyanga
I-Moonstone yi-orthoclase feldspar. Inokwakhiwa kweekhemikhali ze-KAlSi3O8 (i-potassium, i-aluminium, i-silicon, ioksijini). Ilitye lenyanga inokufumaneka kwimibala eyahlukeneyo kubandakanya umhlophe, ukhilimu, ngwevu, isilivere, ipesika, mnyama. Ngelixa babonisa i-adularescence, ayisiyombala ubalabala onokuyifumana nge-moonbow moonstone.
Ilitye lenyanga yomnyama yiplagioclase feldspar. Inokwakhiwa kweekhemikhali (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (isodiyam, ikhalsiyam, ialuminiyam, isilicon, ioksijini). Le yile mveliso efanayo yeekhemikhali ze-labradorite. Ngaphandle kwegama lenyanga lenyanga, inyani yile labradorite emhlophe. Kungenxa yoko le nto eli litye line-labradorescence phenomena esizifumana kwi-labradorite. Ihlala iqulethe ii-inclusions ezimnyama ezifakiweyo.
Njengamanye amatye anqabileyo e-feldspar anje nge-amazonite kunye ne-labradorite, inovakalelo kumachiza, abrasives, ubushushu, iiasidi kunye neammonia. Ungaze usebenzise i-steamer, amanzi ashushu okanye abacoci be-ultrasonic ngeli litye. Sebenzisa isepha ethambileyo kunye nobushushu bendawo yokupompoza amanzi ngelaphu elithambileyo ukugcina ubumnandi belitye elinqabileyo.
Iidipozithi zifumaneka eCanada, Australia, India, Madagascar, Mexico, Myanmar, Russia, Sri Lanka nase USA.
Intsingiselo yelitye lenyanga intsingiselo kunye nokuphilisa iipropathi
Ilitye elinqabileyo licingelwa ukuba lizisa ibhalansi, ukuvisisana kunye nethemba ngelixa liphucula ubuchule, imfesane, unyamezelo kunye nokuzithemba kwangaphakathi. Kukholelwa ukuba iyanceda ukomeleza intuition kunye nokuqonda kwengqondo, ngakumbi ukusinika imibono yezinto ezingabonakali ngokukhawuleza. Kuba isinceda ukuba siphephe umbono wetonela, siyakwazi ukubona ezinye izinto ezinokwenzeka. Kufana nefleshi yenkuthazo eza xa sivulekile kwaye sithule. Xa sinxiba eli litye, inkuthazo etshintsha ubomi inokwenzeka ngakumbi nangakumbi.
Ilungele ntoni inyanga yelitye lenyanga?
Ilitye kucingelwa ukuba lizisa ulungelelwaniso, imvisiswano kunye nethemba ngelixa liphucula ubuchule, uvelwano, unyamezelo kunye nokuzithemba kwangaphakathi. Kukholelwa ukuba iyanceda ukomeleza intuition kunye nokuqonda kwengqondo, ngakumbi ukusinika imibono yezinto ezingabonakali ngokukhawuleza.
Uwakhathalela njani umnyama wenyanga?
Njengamatye amaninzi, iinyanga zenyanga zibuthathaka kwaye kufuneka ziphathwe ngononophelo. Ukucoca, sebenzisa nje amanzi afudumeleyo ngesepha encinci ukucoca. Unokusebenzisa ibrashi ethambileyo xa kukho imfuneko. Emva koko, yoma ngelaphu elithambileyo
Nguwuphi umnwe onxiba iringi yenyanga yomnyama?
Ukufumana izibonelelo ezininzi kweli litye, ukunxiba iringi yesilivere yeyona ndlela ilungileyo. Nokuba ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuyacebisa ukuba ilitye lenyanga lelona linxitywa kakhulu kumnwe omncinci wesandla sasekunene.
Ungazi njani ukuba ilitye lenyanga lenyoka liyinyani?
Eli litye linokuchongwa ngeempawu zalo ezibonakala njengomthombo wangaphakathi wokukhanya. Iyakwazi ukwahlula kwi-orthoclase yelitye lenyanga ngesalathiso sayo esiphezulu sokutsala kunye nomxhuzulane ophezulu.
Ngaba i-rainbow moonstone yendalo?
Ewe yi-labradorite engenambala, i-feldspar yamaminerali enxulumene ngokusondeleyo kunye ne-sheen kwimibala eyahlukeneyo ye-iridescent. Nangona ngokobuchwephesha ingelolitye lenyanga, iyafana ngokwaneleyo ukuba urhwebo luyamkele njengegugu kwilungelo lalo.
Ngaba kunzima kangakanani umnyama wenyanga?
Inobunzima be-6 ukuya kwi-6.5, enokubonakala ngathi ithambile xa ithelekiswa namatye anqabileyo, kodwa kunzima ngokwaneleyo ukuba inxitywe.
Yintoni intengo yomnyama weblue rainbow?
Izinto eziguqukayo, ezimhlophe okanye ezinombala ococekileyo womzimba kunye ne-adularescence, ziqhelekile kwintengiso kwaye ziyalela amaxabiso aphantsi.
Thenga ilitye lenyanga lenyanga kwindalo yethu yevenkile
tags Feldspar, Ingxelo IweMpathombi
Iliso lekati lenyanga
tags iliso Cat ngayo, Ingxelo IweMpathombi